दरवारीलालहरु उही ज्योतिषीतिर
होला, कुण्डलीमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तीनपल्ट राजा हुनै लेखेको होला । उनी दुईपल्ट राजा भइसके, तेश्रोपल्ट पनि राजा होलान् ? तर कसरी ?
ज्योतिषहरु भन्न थालेका छन्– हृदयन्त्र शाहको कुण्डलीमा राजयोग छ । उनी राजा हुन्छन्, हुन्छन्, तर कसरी हुन्छन्– ज्योतिषीहरु मौन रहनुले यसको पनि निकास देखिदैन ।
कम्बोडियाका युवराज नरोद्यम सिंहानुक चीनको प्रवासमा गए । चीनले उनलाई यसरी संरक्षण गरिदियो कि देशमा अलिकति सिंहानुक वातावरण बन्नासाथ पुनस्र्थापना गराइदियो चीनले ।
अर्थात्, राजाहरु चुनावबाट आउने होइनन् । राजा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साजिसमा जान्छन्, उनीहरु आउने पुल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र राष्ट्रिय स्वागतले नै हो । यो सब वातावरण न ज्ञानेन्द्रमा बनेको छ, न हृदयन्त्रमा । अनि कसरी राजतन्त्र पुनस्र्थापित हुनसक्छ ? ज्योतिषहरुले बाटो किन देखाएनन् ?
अढाइया, साँढे सात, शनिजस्ता अनेक दोषहरु देखाउँछन् ज्योतिषहरु र त्यसको निदानका उपाय पनि बताउँछन् । पूजापाठ आदि सुझाउँछन् । बाजे ज्ञानेन्द्र र नाती हृदयन्द्र नेपालका राजा हुने मार्ग बताउन नसक्नु ज्योतिषी कमजोरी हो । यस्ता सुझावमा रमाउनु र राजतन्त्र आउनेमा भर गर्नु आत्मरती मात्र हो ।
जब ८१ प्रतिशत हिन्दुसहित ९५ प्रतिशत ॐकार परिवारले हिन्दुराष्ट्र जोगाउन सकेनन्, १२ अघि धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्ने केही जना नेताको प्रतिवादन गर्न सकेनन्, संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्न पाइन्न भन्न सकेनन्, यस्ता हिन्दुहरुले राजतन्त्र कसरी पुनस्र्थापित गराउन सक्छन् ? देखिन्छ, पूर्वराजा जता जान्छन्, उतै आमनागरिक जयजयकार गरेको देखिन्छ सुनिन्छ । ती छरिएका हिन्दुवादी, राजावादीहरुलाई एकढिक्को पार्न नसकेकोमा हालै नेपाल भ्रमण गरेर फर्केका शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीले समेत दु:ख व्यक्त गरेका थिए ।
हो, एउटा राजा फालेर सयौं महाराजा बनेका छन्, देश बालेर खरानी बेच्नेहरु शासक बनेका छन्, एकताको कडी फुस्कदा देश जातीय, क्षेत्रीय बिखण्डनतिर अग्रसर भएको छ र कुनै एउटा नेता राष्ट्रिय चिन्तनसहित पहाड बनेर उभिन सकेको छैन । यो स्थितिमा ज्योतिषको भर होइन, जनता र विश्वशक्तिकै भर गर्नुपर्ला कि ?